January 20, 2021 - Online Hartha
နာကျင်မှု လုံးဝမရှိဘဲ ဆူး ၊ညှောင့် နှုတ်ယူနည်းလေးတွေ
January 20, 2021 by Online Hartha
အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေမို့လို့ သိမ်းထားစေချင်ပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေ အများဆုံးဖြစ်တတ်ပေမယ့် လူကြီးတွေလဲ တကယ်တမ်း အဆူးဝင်ရင် နေမထိထိုင်မသာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အရေပြားထဲကို သစ်သားစ၊ သတ္တုစ၊ ဖန်ကွဲစ စတာတွေ စူးဝင်သွားတဲ့အခါ အရမ်းနာကျင်တာ ကိုက်ခဲတာဖြစ်စေနိုင်ပြီး ရောဂါပိုးဝင်ရောက်ကာ ပြည်တည်နိုင်တဲ့အတွက် စူးဝင်သွားတဲ့ အဆူးကို ဖယ်ထုတ်ပစ်ဖို့လိုပါတယ်။ လူတော်တော်များများက အပ်၊ လက်သည်းညှပ်၊ ဇာဂနာတို့နဲ့ တူးဆွပြီး အဆူးကို ထုတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနည်းက အရမ်းကို နာကျင်စေပြီး ရောဂါပိုးအလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အတွက် မသုံးသင့်ပါဘူး။ ဒါဆို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ???? အရမ်းကို ရိုးရှင်းပြီး လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ ဖြေရှင်းကြည့်ရအောင် ………… ၁။ မီးတိပ်ဖြင့် ဆူးထုတ်နည်း >>> ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ လွယ်ကူပေမယ့် နက်နက်နဲနဲဝင်သွားတဲ့ ဆူးအတွက်တော့ သုံးမရပါ။ ပြုလုပ်ပုံ အဆူးဝင်နေတဲ့ နေရာကို … Read more
အှနျလိုငျးမှာကွညျ့ရှု့သူဦးရေ အလှနျမြားပွားသှားခဲ့တဲ့ သာမဏကြေျောနှဈပါးရဲ့ လကျစှမျး(ရုပျသံ)
အွန်လိုင်းမှာကြည့်ရှု့ သူဦးရေ5သိန်း ကျော်သွားတဲ့ သာမဏေကျော် နှစ်ပါးရဲ့လက်စွမ်း ဒီဗွီယိုဖိုင်လေးဟာ ဆိုရင်လည်း ကြည့်ရှု့ သူဦးရေ5သိန်း ကျော်သွာခဲ့ပီဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတာက အခြားသော တီးမှုတ်သူတို့မှာ လူကြီးများဖြစ်ပီး မောင်းဆိုင်းတီးခတ် သူမှာတော့67 နှစ်လောက် သာရှိသေးမယ့် ကလေးငယ်လေးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရွယ်လေးက လူကြီးတွေနဲ့ ရင်ပေါင်တန်းပီး စည်းဝါးကျကျ မောင်းဆိုင်းကို တီးခတ်ပြသွားတာ တစ်ကယ်တော်လွန်းပါတယ်။ ကိုယ်တွေဆို သံစဉ်ကိုလိုက်တီးဖို့ စည်းဝါးကိုက်အောင်တီးနိုင်ဖို့ ဆိုတာထားအုံး မောင်းပေါ်က ဘုလေးတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် မလွဲမချော် ဖြစ်အောင် မတီးနိုင်ပါဘူး။ဆိုလိုချင် တာကမောင်းဆိုင်းပညာဆိုတာ အမြင်လွယ်သလောက် အရမ်းခက် ခဲတယ် ဆိုတာကိုပါ။ အခုတော့ ကိုရင်လေးတစ်ပါးက ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး နဲ့ အမှားမပါ ကျွမ်းကျင်စွာတီးခတ်ပြသွားတာ နည်းတဲ့စကေးမ ဟုတ်ပါဘူး။ … Read more
အံ့သြစရာကောင်းလွန်းတဲ့ မြန်မာလူမျိုး ဂျင် ပါရမီရှင် ကိုပြောင်ကြီး (ရုပ်သံ)
အံ့သြစရာကောင်းလွန်းတဲ့ မြန်မာလူမျိုး ဂျင် ပါရမီရှင် ကိုပြောင်ကြီး (ရုပ်သံ) ရုပ်သံ အောက်ဆုံးတွင် ပါရှိသည်…. ဒီလိုလူမျိုးတွေ့ဖူးလားဗျ တွေ့ဖူးရင်ဆက်သွယ်နော် ရွာဘုရားပွဲမှာ ပြဖို့အတွတ်ဌားမယ်ဗျာ… ကြံကြံဖန်ဖန် ဂျင်ကို နှာခေါင်းပေါ် ထိပ်ပေါ်နေရာအစုံပြတာ အံသြစရာပဲဗျာ… လေးစားမိတယ်ဗျာ ဂျင်ကို ကတုံးပေါ် နှာခေါင်းပေါ် လျှာပေါ် နောက်ဆုံး သွားကြားထိုးတံပေါ် တင်ပြသွားတဲ့ အကွက်ကလဲ လန်းတယ် ဘာမှော် မျက်လှည့်မှ မဟုတ်ပါဘူး ခင်ဗျာ သူ့လေ့ကျင့်မှု့ဝါသနာ Talent တစ်ခုကို မျက်စိရှေ့မှာတင် ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် လုပ်ပြသွားတာပါ အံ့သြမှင်သက်မိပါတယ်ဗျာ မြန်မာတွေလဲ မခေါ်ဘူးဆိုတာ ဒီဗီဒီယိုကို ကြည့်သွားလိုက်ပါ သူကအပျော်တမ်းဆိုပေမယ့် ပြိုင်ပွဲတွေတောင် ၀င်ပြိုင်လို့ရနိုင်တယ်နော် စကေးကတော့ သဘောကျရင် မျှဝေပေးကြပါအုံးဗျ သူ့အရည်အချင်းကို တခြားသူတွေလဲ မြင်ဖူးအောင်ပါ… #လူတင်သား အကြီးကောင် Unicode … Read more
မင်္ဂလာဆောင်ခါနီး (၁) ရက်အလိုမှာ ဇနီးလောင်းရင်နာစရာအဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရ
မင်္ဂလာဆောင်ခါနီး (၁) ရက်အလိုမှာ ဇနီးလောင်းရင်နာစရာအဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရ အရမ်းချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူ (၂) ဦး မင်္ဂလာဆောင်ခါနီးမှာ သတိုးသမီး ယဉ်တိုက်မှု့ဖြင့်ပွဲ ချင်းပြီးသေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်… ရင်နာဖို့ကောင်းလိုက်တာထိုင်းနိုင်ငံ၊ ပထုံဌာနီခရိုင်၊ တလာဖွန်စာမြို့၊ ဝတ်မခေ ဘုန်းကြီးကျောင်းရပ်ကွက်နေ Arasdeg+Sahhet တို့ဟာချစ်သူသက်တမ်း (၇)နှစ် အကြာမှာ နှစ်ဖက်မိဘများ၏သဘောတူချက်များဖြင့် မင်္ဂလာရက်မြတ် အားရွေးချယ်ပြီးရက်သက်တစ်ပတ်အကြာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မင်္ဂလာဆောင်ခါနီး (၁)ရက် အလိုမှ Sahhet(ဇနီးလောင်း)ဖြစ်သူမှာ မင်္ဂလာပွဲအတွက် လိုအပ်တာလေးများသွားဝယ်ရင်း အခုလို ကားတိုက်ပြီး နေရာမှာတွင်ပင် ဆုံးပါးသွားတာကြောင့် ကျန်ရစ်သူArasdeg(ခင်ပွန်းလောင်း)မှာရူးမတတ်အော်ဟစ်ငိုကြွေးနေတဲ့ပုံရိပ်လေးများပါ… ဘယ်လောက်တောင် ပူဆွေးနေရမလဲဆိုတာမြင်ယောင်ကြည့်တာနဲ့တင် ယူကြုံးမရဖြစ်ရပါတယ်..အချိန်တွေ အကြာကြီး ချစ်သူ သက်တမ်း အကြာကြီး လက်တွဲခဲ့ပြီးမှမမျှော်လင့်ထားတဲ့ ကံကြမ္မာဆိုးကြောင့် ရင်နင့်စရာ ကြုံခဲ့ရတာပါ ဘဝဆက်တိုင်း ဒီလို အဖြစ်ဆိုးမျိုးမကြုံတွေ့ရပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။်ချစ်သူတွေလဲ အနားမှာချစ်ခွင့်ကြုံရတုန်းမှတန်ဖိုးထားလေးစားမှု့ ကိုယ်စီနဲ့ နီးစပ်နိုင်ကြပါစေ…။ … Read more
လက်သည်းခွံပေါ်က အဖြူရောင်လခြမ်းလေးတွေရဲ့အဓိပ္ပါယ်… သင့်ရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေကို ကြည့်တဲ့အခါ လက်သည်းခွံ အရင်းနေရာ ကနေ ထွက်လာတဲ့ အဖြူရောင် လခြမ်းသဏ္ဍာန်လေးတွေကို သတိပြုမိ ပါသလား။တကယ်တော့ ဒီလခြမ်းလေးတွေက လက်သည်းရဲ့ အရမ်းကို အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက လက်သည်းမှာပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆိုတာထက် ပိုပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ဒီလခြမ်းလေးတွေ ကတဆင့် သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို အများကြီးသိနိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်…တရုတ်ဆေးပညာမှာ လက်သည်းပေါ်က လခြမ်းလေးတွေကို လေဖိအားတိုင်း ကိရိယာလိုပဲ ကျန်းမာရေးကိုတိုင်းတဲ့ ကိရိယာတစ်ခု အနေနဲ့ မှတ်ယူ ပါတယ်။ လခြမ်းရဲ့ အခြေအနေက သင့်ကျန်းမာရေး သင်္ကေတပါ။ ကျန်းမာရေးချွတ်ယွင်း လာတဲ့အခါမှာ လခြမ်းကပြောင်းလဲလာတာ၊ လုံးဝပျောက်သွားတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးပြန်ကောင်းလာတဲ့ အချိန်မှာ လခြမ်းလေးတွေက မူလအခြေအနေအတိုင်း ပြန်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ဆေးပညာရှင်များရဲ့ အဆိုအရ လက်ချောင်း ၈ … Read more
ငှကျပြောသီးအစိမျးတှကေို တဈနာရီအတှငျး မှညျ့သှားစမေယျ့နညျးလမျး
ငှက်ပျောသီးအစိမ်းတွေကို တစ်နာရီအတွင်းမှည့်သွားစေမယ့်နည်းလမ်း ဈေးထဲမှာရောင်းချနေတဲ့ ငှက်ပျောသီးအခိုင်တွေဟာ များသောအားဖြင့် အစိမ်းတွေချည်းပါပဲ။ ငှက်ပျောသီးအစိမ်းတွေဝယ်လာပြီး မမှည့်ခင်မှာ စားချင်တဲ့အခါ သရေကျနေရုံကလွဲပြီးဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူး ။ ဒီတော့ အခုလိုမဖြစ်ရအောင် ကိုယ်စားချင်တဲ့အချိန်မှာ မှည့်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ငှက်ပျောသီးတွေကိုမှည့်စေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း ၃ မျိုးရှိပါတယ်။ ၁- တစ်နာရီအတွင်းမှည့်စေခြင်း ငှက်ပျောသီးတွေကိုတစ်နာရီအတွင်းမှည့်စေချင်ရင်တော့ ငှက်ပျောသီးစိမ်းတွေကို Oven ထဲထည့်ပြီးတော့ ၁၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ တစ်နာရီတိတိ ကင်လိုက်ပါ ။တစ်နာရီကြာတဲ့အခါ Oven ထဲက ထုတ်ပြီးတော့ ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ပြီး အအေးခံထားပါ။အေးသွားတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ငှက်ပျောသီးဟာ အလွန်အရသာရှိပြီး ချိုမြိန်မှည့်ဝင်းနေတဲ့ငှက်ပျောသီးဖြစ်သွားကြောင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ၂- နှစ်ရက်အတွင်းမှည့်စေခြင်း ငှက်ပျောသီးတွေဟာ Ethylene ဆိုတဲ့ ဓါတ်ငွေ့တွေကိုထုတ်လွှတ်လေ့ရှိပါတယ်။ဒီ ဓါတ်ငွေ့ဟာ အသီးတွေကိုမှည့်စေတဲ့ ဓါတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် အခြားအသီးတစ်မျိုးကို ငှက်ပျောသီးနဲ့အတူရောထားတဲ့အခါ အမှည့်မြန်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ရက်အတွင်းမှည့်စေချင်ရင်တော့ ဒီဓါတ်ငွေ့ကို ငှက်ပျောသီးတစ်ဝိုက်မှာပဲရှိနေစေဖို့အတွက် ငှက်ပျောသီးတွေကို ပလတ်စတစ်အိတ်တစ်ခုနဲ့ထုပ်ထားလိုက်ရုံပါပဲ။ ၃- … Read more
ကငျဆာရောဂါကို အံတုရငျး ထူးထူးခွားခွား မီးသှေးတှစေားတတျတဲ့ ယာဉျထိနျးရဲမေ…
ကင်ဆာရောဂါကို အံတုရင်း ထူးထူးခြားခြား မီးသွေးတွေ စားတတ်တဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲမေ မပပဝင်း အဆိုးဆုံးသော ရောဂါဝေဒနာတခုဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာရောဂါ ဝေဒနာကတော့ ခံရတဲ့ သူတိုင်း စိတ်ညစ်ရပြီး ဒီရောဂါကြီးဖြစ်ရင် အသက်အန္တရာယ်အရင်ဆုံး စိုးရိမ်ရတယ်ဆိုတာ သိကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း တချို့သော ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာရှင်တွေကတော့ ဘဝကြီးကို အရှုံးမပေးကြပါဘူး။ ဒီထဲမှာတော့ ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာကို အံတုရင်း ယာဉ်ထိန်းရဲဆိုတဲ့ တာဝန်ကြီးကို ကျေကျေနပ်နပ် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ မကွေးဂုဏ်ရည်ဆုပိုင်ရှင် မပပဝင်း အကြောင်း ပြောချင်လွန်းလို့ပေ့ခ်ျကတော့ ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ မပပဝင်းကတော့ သူ ကျောင်းတတ်တဲ့ အရွယ်လောက်ကတည်း ယာဉ်ထိန်းရဲ အလုပ်ကို ဝါသနာပါခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ အသက် ၂၉ နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ မပပဝင်းကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ မှာ မကွေးမြို့ ပရဟိတအဖွဲ့ကပေးတဲ့ မကွေးဂုဏ်ရည် ဒုတိယဆုကို … Read more
ကိုက်လိုက်တဲ့သွား အခေါင်းတောင်ပေါက်နေပြီ ဆိုတဲ့ လူနာရှိလား ဒီအပင်လေးကို လူတိုင်းမြင်ဘူးမယ်ထင်ပါတယ် အလေ့ကျနေရာတိုင်းမှာပေါက်ပါတယ် ဗိစပ်ပင်လို့ခေါ်ပါတယ် ။ သွားကိုက်နေတဲ့မိတ်ဆွေ အခေါင်းပေါက်ရှိနေရင် အဲ့ဒီအပင်က အဖူးဝါဝါလေးအခေါင်းပေါက်ထဲ ထည့်ပေးလိုက် ခနနေ သွားကိုက် တာ ဘယ်ရောက်မှန်းမသိအောင်ပျောက်သွားလိမ့်မယ် ။ သွားကိုက်လာတိုင်ပြု လုပ်ပေးပါ အရှင်းပျောက်ပါတယ်ဗျာ။ သွားကိုက်လွန်းလိုမျက်ရည်ကျနေသူတွေ ခနချင်းမှာပဲပျောက်ပါတယ် စမ်းကြည့်ပါ။ ငွေလည်းမကုန် ၊ဆေးလည်းမရှား ရောဂါဝေဒနာများပျောက်ကင်းသက်သာကြပါစေ။ဒေသအလိုက် အပင်အခေါ်ဝေါ်ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ စိုးမြတ်ဦး Unicode Version ကိုကျလိုကျတဲ့သှား အခေါငျးတောငျပေါကျနပွေီ ဆိုတဲ့ လူနာရှိလား ဒီအပငျလေးကို လူတိုငျးမွငျဘူးမယျထငျပါတယျ အလကေ့နြရောတိုငျးမှာပေါကျပါတယျ ဗိစပျပငျလို့ချေါပါတယျ ။ သှားကိုကျနတေဲ့မိတျဆှေ အခေါငျးပေါကျရှိနရေငျ အဲ့ဒီအပငျက အဖူးဝါဝါလေးအခေါငျးပေါကျထဲ ထညျ့ပေးလိုကျ ခနနေ သှားကိုကျ တာ ဘယျရောကျမှနျးမသိအောငျပြောကျသှားလိမျ့မယျ ။ သှားကိုကျလာတိုငျပွု လုပျပေးပါ အရှငျးပြောကျပါတယျဗြာ။ သှားကိုကျလှနျးလိုမကျြရညျကနြသေူတှေ … Read more
တဈသကျလုံး အသုံးဝငျမှာမို့ ရှယျထားပါ နာမညျကွားရုံနဲ့တငျ ရောဂါပိုး တဈဝကျသစေနေိုငျလောကျတယျ
လောက်သေရွက်၏ သင်မသိသေးသော ဆေးဖက်ဝင်အသုံး လန်းဆန်းစေသောလောက်သေရွက် အသုပ်တစ်ခွက် လောက်သေရွက်များအားရေဖြင့်စင်အောင်ဆေးပြီးဓါးဖြင့် ပါးပါး လှီ၍ ကြက်သွန် ကြော်၊ နှမ်းလှော်၊ပုဇွန်ခြောက်တို့ ကိုထည့်ပြီး သံပုရာ ရည်ဆမ်းကာ လောက်သေ ရွက်ကို သုပ်ကျွေးခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုလေသည်။အဒေါ်၏ ပြောပြ ချက်အရ ချွေးငုတ် သူများ ချွေးပုပ်များ ထွက်ပြီး လူခန္ဓာ အား လန်းဆန်းစေကြောင်း၊ အမှန်ဆိုလျှင် ထားဝယ်မှိုင်း ပင်ပါ ထည့်သွင်းပြီးသုပ်ကြကြောင်းနှင့်လက်ဖက်ရည် ဝိုင်း တွင်တည် ခင်းသော ရိုးရာဓလေ့တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်ဆို လေသည်။ လောက်သေပင်၏ ထားဝယ်အမည်မှာ မုဆိုးလှံဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။ ထားဝယ်မြို့တွင် အစိုးရတာ ဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ် လောက်သေ ရွက်အားလက်ဖက် ခြောက် အဖြစ် ရေနွေးကြမ်း သောက်ကြသည်လည်း တွေ့ဖူးခဲ့ပါသည်။ ဆေးလိပ်မဖြတ်သူတို့အတွက် လောက်သေရွက် အချို့လူအများ ဆေးလိပ်ကို အလွန်နှစ်ခြိုက်ကြပါသည်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၏ … Read more
ငါးခေါင်းဟင်း ကြိုက်တတ်သူများ သတိထားကြပါ
ငါးခေါင်းဟင်း ကြိုက်တတ်သူများ သတိထားကြပါ ဒီနေ့ညနေ ဆေးခန်းတစ်ခုမှာ ညည်းစီစီဖြစ်နေလျက်နဲ့ လူနာ ကြည့်ပေးဖြစ်တော့ လာပြတဲ့ လူနာရဲ့ စကားနဲ့တင် မျက်လုံးတောင် ပြူးတယ် လူနာ အဘ အသက်က ၇၀ ကျော်ပေါ့သူ့သမီးက လသားကလေး ပိုက်လို့ ဆေးခန်းလာပြတယ် ဘာဖြစ်တာလဲ အဘဆိုတော့စအိုမှာ အပ်ချည်ကြိုး စမ်းမိလို့တဲ့ အန် ….အပ်ချည်ကြိုးစလေးနဲ့ အပ်နဲ့ စမ်းမိတာ တဲ့ အပ်နဲ့ စူးမိတာလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ဘူး အဘက လေဖြတ်ထားသလားဆိုတော့ ကြာပြီ ဖြတ်ထားတာ ခုက လမ်းတောင် သူ့ဘာသာ လျှောက်နေတာဖင်တရွတ်တိုက်ဆွဲ သွားမိလို့လားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ အဘက ပေါက်ကရ ကောက်စား ကောက်ဝါးတတ်တာမျိုး ရှိသလား ဆိုတော့လည်း အဲ့ဒီ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ လူနာအဘက ဝင်ပြောတယ် သူက ငါးခေါင်း သိပ်ကြိုက်တာ … Read more